सुदेश खालिङ बने एभरेष्ट बैंकको पहिलो नेपाली सीईओ Bizshala -
सुदेश खालिङ बने एभरेष्ट बैंकको पहिलो नेपाली सीईओ
काठमाण्डौ । स्थापनाको साढे २ दशकपछि पहिलोपटक एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा नेपाली नियुक्त भएका छन्।
हालसम्म यो बैंकको सीईओमा भारतीय नागरिकमात्रै हुँदै आएका थिए। अब भने सुदेश खालिङ पहिलोपटक एभरेष्ट बैंकको सीईओमा नियुक्त भएका छन्। यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौखिक जानकारी गराइसकेको बैंक स्रोत बताउँछ।
हाल बैंकका सीईओ भारतीय नागरिक गजेन्द्रकुमार नेगीलाई यही शुक्रबारबाट बिदाइ गर्ने तयारी भइरहेको बैंक स्रोत बताउँछन्। चार वर्षका लागि सीईओ भएका नेगीलाई एभरेष्ट सञ्चालक समितिले १७ महिनामै फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको बताइएको छ। एभरेष्ट बैंकमा भारतको पञ्जाब नेसनल बैंकको २० प्रतिशत हिस्सा रहेको छ।
सुदेश खालिङले १५ दिनअघि मात्रै सिटिजन्स बैंकको सञ्चालक समिति सदस्यबाट राजीनामा दिएका थिए। यद्यपि सिटिजन्स बैंकले यसबारे आधिकारिक जानकारी दिएको छैन।
खालिङसँग ३ दशक बढी बैंक अनभुव रहेको छ। खालिङ सिटिजन्सको सञ्चालक हुनुअघि लक्ष्मी बैंक लिमिटेडको सीईओ थिए। उनी लक्ष्मी बैंकबाट चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरी बाहिरिएका थिए।
एनएमबीको नयाँ वर्ष अफर:ओम्नी च्यानलमार्फत कारोबार गर्दा
काठमाण्डौ । एनएमबी बैंक लिमीटेडले ओम्नी च्यानलमार्फत अन्तरबैंक...
मौद्रिक नीतिको तेश्रो समीक्षाबाट मार्जिन लोनमा कडाई गर्ने
काठमाण्डौं । नेपाल राष्ट्रबैंकले कोरोना संक्रमणको दर अझै उच्च भई...
बैंकहरुको कर्जा प्रवाह असन्तुलित देखिएकोमा गभर्नर
वैशाख १ बाट सेयर धितो कर्जा कुन बैंकबाट कति ब्याजमा पाइन्छ ?
काठमाण्डौ । नयाँ वर्ष अर्थात् वैशाख १ गतेबाट पनि लगानीकर्ताहरुले...
शनिवार र घोडेजात्राको दिन पनि बैंक खोल्नुपर्ने, कारण यस्तो छ
काठमाण्डौ । चैत महिनाको बाँकी दिनमा परेका सार्वजनिक विदामा समेत...
हिमालयन र इन्भेष्टमेन्टबीचको मर्जर भाँडिन लागेको हो ? यस्तो छ
काठमाण्डौ । हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीचको संभावित...
व्यापार विस्तारमा वाणिज्य बैंकहरु आक्रामक, निक्षेप र कर्जा
काठमाण्डौ । पछिल्लो केही समयदेखि वाणिज्य बैंकहरु निकै आक्रामक...
मिति घर्कियो, हिमालयन र इन्भेष्टमेन्टबीच किन हुन सकेन मर्जर
काठमाण्डौ । बहुचर्चित र बहुप्रतिक्षित हिमालयन बैंक र नेपाल...